Dardaaran Qallooca!…………. WQ: Nada Yuusuf Cumar | Horn Cable TV
29th October 2016 at 7:17 pm
Dardaaran Qallooca!…………. WQ: Nada Yuusuf Cumar
Marka laba gayaan ahi is guursadaan, waxa la siiyaa dardaaranno dhawr ah oo qaarba dhan u jeedaan, qaar badani waa wax tar qaarna waa wax yeelo. Kuwa wax yeeladaa waxa ka mida dardaarankan.
Wiilka: “Waaryaa naagaha la iskuma jilciyo ee naagta ha isku jiljilcin ee nin adag noqo oo laga baqo, haddii kale kadabkaaga ayay kalax ku shubaysaa, waligaa mushaharkaaga iyo hawlahaaga yay ogaan, naagaha wax walba looma shege waxba ha u sheegin.”
Gabadha ” Naayaa hooy!! ninka ha isku jilcin, uu kugu tuman, barruu cidla kaaga dhaqaaqi, naa ka danayso oo is adkee oo yuu kuu arkin naag aan waxba ahayn, ragga la iskuma jilciyo oo annagaa naqaane, biilkana hagbad gal oo meel kala dhigo, imikaba dantaada ogow barri haddaad kala tagtaan yaad cidla is taagine.”
Haddaba labada qof ee iyaga oo sidaa u cabbaysan isku imanayaa maxay ku bilaabi noloshooda maxay se ku dhammaan?.
Waa sababta keentay in aynnu ku maahmaano “Nin iyo naagtii colna maaha nabadna maaha”
Haddii ay soomalidu sidaa yidhaahdeen Allena bal u fiirso hadalkiisa iyo tilmaanta uu ka bixiyay lammaanaha.
” Dumarku waxa ay idin yihiin hu (Maryo), idinna ragoow waxa aad u tihiin hu”
lammaanayaal ma dad dhar, hu iyo maryo isku ah ayaa wax kala qarsan kara. haddii aad tihiin lammaane saxsaxn oo jidka Alle dajiyay raacaaya waxba idiinma kala qarsoona, qofwalibana ka kale waa u hu oo uu ilaashanayaa, haddii se aydaan isku arkayn in aad sida Alle sheegay tihiin oo aad sida soomalida raacaysaan Waxba iskuma tihidin.
Idinka ayaa is doortay, idinka ayaa is deeqay, idinka ayaa is damcay oo dookh iyo dabeecad isku soo xushay. Noloshiinna ka tashada, talada koowaadna ka qaata Alle iyo rasuulka cid talo laga qaato iyaga ayaa ugu wanaagsane.
Nolosha Qoysku dhib ayay leedahay wax badan ayaa idin soo waajahaaya balse ku ilaawa dhibkeeda dheefta ka badan ee aad wada helaysaa..
Hadaf iyo qorshe qoys oo aad la haataan ayaad ku horu maraysaan oo ku guulaysanaysaan, kolkaa lammaanoow si aad u guulaysataan dardaarannada qallooca ee la idin siiyo dhaafa oo hirgaliya idinka oo wada jira hadafyadiinna nololeed ee aad leedihiin.
Isu debca, isu dedaala, isu diirnaxa, isu damqada, is daryeela oo is addeeca dantu idinka ayay idinka dhaxaysaaye.